Tanàna – fanilo
Ny tanA�nana��i Tsiroanomandidy: TanA�nana��ny Manjaka tokana
Araka ny efa nambara, tsy tongatonga ho azy ny anaran-tanA�na iray fa nanana ny tantarany avokoa. Isana��ny nanamarika ny tantaram-pirenena ny tantarana��i Tsiroanomandidy, distrika sy kaominina iray azo lazaina hoe niantombohana��ny tantarana��i Madagasikara satria, isana��ireo toerana norombahana��ny Mpanjaka Radama I nanitarany ny fanjakany, ny taona 1822, raha hiverenana ny rakitry ny ela. Isana��ireo distrika mandrafitra ny Nosy miala 212 kilaometatra eo ao andrefana��Antananarivo ao ity tanA�nana��ny Manjaka tokana ity satria nametra mihitsy hono, ny mpanjaka Radama voalohany nanjaka teto Imerina, rehefa nandresy ny fanjakana sakalava notarihina��ny mpanjaka Ramitraho tamina��ny fotoana��androny fa a�?tsy roa no mandidya�? ao an-toerana nanomboka teo fa ny tenany irery ka dia izy no nametraka ny anaran-tanA�na.
Ny tanA�na : Nisy fototra niaviana fa tsy tongatonga ho azy
Tsy tongatonga ho azy akory ny anarana��ny tanA�na ireny fa nisy dia nisy tokoa ny fototra nipoirany. Savaranonando ihany izao, fa ny manetsabe mbola hoavy. Mila mametraka tantara ho ana��ny taranaka isika raha tiana ny tsy hahakizo fara sy hahavanona azy ireo. Ho fanilo mitsilo azy ireo tokoa ny voarakitra ato anatina��ity tranonkalam-pifandraisana itya��
Araka ny efa nambara,A� tsy tongatonga ho azy ny anaran-tanA�na iray fa nanana ny tantarany avokoa. Isana��ny nanamarika ny tantaram-pirenena ny tantarana��i Tsiroanomandidy, distrika sy kaominina iray azo lazaina hoe niantombohana��ny tantarana��i Madagasikara satria,A� isana��ireo toerana norombahana��ny Mpanjaka Radama I nanitarany ny fanjakany, ny taona 1822, raha hiverenana ny rakitry ny ela. Isana��ireo distrika mandrafitra […]